musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Namibia Breaking News » Namibia kutengesa nzou dzemusango
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Hurumende Nhau • Namibia Breaking News • nhau • Kutarisirwa • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Zvirongwa ne Namibian Ministry of Environment, Masango uye Tourism (MEFT) kubata nekutengesa 170 dzenzou dzekupedzisira dzisingabhadharwe pakati penzvimbo dzekurima dzekuchamhembe kwakadziva kumadokero nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva kweNamibia dziri kuratidza kukakavara zvakanyanya uye dzinogona kunge dziri njodzi huru kune indasitiri yekushanya yemuno yatotambura.
"Vashanyi vanogara kunze kwenyika vari kutevera budiriro iyi zvakanyanya uye vari kutyisidzira nekuramwa kwekushanya kweNamibia," izvo zvinozokanganisa kuchengetedza, akadaro Izak Smit, anozivikanwa mukuchengetedza shumba mugwenga.
MEFT svondo rapfuura Chitatu chakashambadza kubva kumakambani akanyoreswa emitambo yekuNamibia kutora uye kubvisa mana enzou makumi matatu kusvika makumi matanhatu munzvimbo dzeOmatjete, Kamanjab, Tsumkwe neKavango East.
"Nekuda kwekusanaya kwemvura uye nekuwedzera kwenhamba dzenzou dzakabatana neHuman-Elephant kupokana kwezviitiko, pane chikonzero chakaonekwa chekudzikisa huwandu hwevanhu," (sic) kushambadza kwakaverengwa.
Nekudaro, hapana humbowo hunosimbisa hunotsigira chirevo ichi hwakapihwa, pamwe nemhedzisiro yeAugust 2019 ongororo yemuchadenga yenhamba yenzou kuchamhembe-kumabvazuva isati ichaburitswa kunyangwe zvikumbiro.
Zvinotaridza kuti chikumbiro chematender chisarudzo chezvematongerwo enyika sezvo vemo vanochengetedza nzvimbo vakabatwa nezvikumbiro, pasina kutaurwa kwekutorwa uku nekutengeswa pamusangano wapfuura wekuzeya kudzokororwa kweElephant Management Plan yeNamibia. Zvimwe zvirevo zvekongiri zvekudzora Kukakavara Kwenzou dzevanhu zvakatenderanwa nguva pfupi yadarika nevatsigiri, kusanganisira kupihwa kwenzvimbo dzemvura yenzou kure nemisha, kukomba magetsi nemakoridho enzou ayo anogona kubvisa chero kukosha kwekufamba.
Vakuru veMEFT vakuru vanga vasingazive izvi zvirevo.
Zviratidziro zvaive zvekuti huwandu hwevanhu huri kudzikira, neNamibia ichitambura nekusanaya kwemvura kwenguva yakareba uko kwakaparadza vanhu vazhinji mumitambo uye kwakakonzera kuputika kwechinyakare kwechigwadara icho chakanonoka kukonzeresa kufa kukuru kwenzou yeLinyanti-Chobe.
Mutauriri weMEFT, VaRomeo Muyanda, vakasimbisa neChipiri kuti zvitunha makumi matatu nemasere zvakawanikwa parwizi rweLinyanti.
“Tinofungidzira zvikuru kuti nzou dzinogona kunge dzakafa nechigwadara tichifunga kuti svondo rapfuura mvuu gumi nembiri dzakafa nechigwadara. Samples dzakatorwa kuti dzinyatsoziva chikonzero chaicho, ”akadaro Muyanda.
Kumusangano wepamutemo wenzou wakaitirwa kuWindhoek masvondo maviri apfuura, Pohamba Shifeta weMEFT akasimudzawo musoro uyu muhurukuro yake yekuvhura umo akadzokorora kuti Namibia ine mvumo yekutengesa huwandu hwayo hunofungidzirwa hwematani makumi mashanu ematanda enzou. Kutengesa kwenyanga dzenzou zvakadaro kwakarambidzwa parizvino pasi pemitemo yeCITES nezvikumbiro zvichangoburwa neNamibia zvekutangisa kutengeserana nenyanga dzenzou zvakundwa zvakanyanya
Sekureva kwemushumo weAfESG wemuAfrica wenzou wegore ra2016 kwaive nenzou 22 754 muNamibia, Ruzhinji rwevanhu ava, dzinofungidzirwa kuti nzou dzinosvika 17 265 dziri mumombe dzinoyambuka muganhu dzinofamba pakati peNamibia, Angola, Zambia neBotswana. Director weNational Resources Colgar Sikopo vakamboti mhuka dzinofamba idzi hadzina kuverengerwa mukufungidzira kweNamibia.
Zvisinei Namibia yakaramba kutora chikamu muGreat Elephant Census ya2015 uye yakaramba zvikumbiro zveruzivo rweongororo dzayo kana nzira dzakashandiswa. Kune huwandu hwakaganhurika hwechivimbo muhuwandu hwehuwandu hwevanhu uhu hunodarika huwandu hwechivimbo hwegumi muzana hunofungwa nevaongorori vemuchadenga, saka hazvina chokwadi kana dhizaini yekuongorora yemuchadenga yeNamibia iri kupa fungidziro dzechokwadi dzenzou dzinofamba dzinofamba pakati penyika ina. .
Makumi mapfumbamwe eiyo 170 nzou dzinofanirwa kubatwa munzvimbo dzemunharaunda dziri pamuganhu weKaudom National Park isina kukomberedzwa uye huwandu hwayo hunofungidzirwa hwevanhu zviuru zvitatu nzou.
Idzi nzvimbo ndidzo dzaimbove minda yemadzitateguru eSan, neKavango East yakavezwa kusvika mazana mapurazi ekuhirisa mazana mashanu emahekita 500 2 imwe neimwe yakapihwa kune vezvematongerwo enyika vepamusoro kubva 500. Kukura kukuru, kusadzora kutemerwa nematombo kwevanofungidzira matanda eChina pano kubvira 2005 asi akadzima anononoka kukura African rosewood (Guiberto coleosperma).
Mamwe makumi masere anofanirwa kutorwa munzvimbo dzekutengesa uye dzekudyidzana zasi kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweEtosha National Park uko kunozivikanwa mombe mbiri, diki remakumi matatu nguva nenguva kuenda kumaodzanyemba seOmatjete (80 km kuchamhembe-kumabvazuva kwe guta guru Windhoek).
Kunyangwe kutora nzou idzi kuchave mune zvehupfumi kana panyama zvinobatika kunetsekana zvakanyanya, nekuda kwekupararira kwadzo pamusoro penzvimbo dzinowanzo svikika. Danga rekuchamhembe kwakadziva kumadokero raiita kunge rakapararira pamusoro perenje rakakura, rakaomarara, nepo nzvimbo yeKavango East-Tsumkwe yakatokura uye iri muKalahari Sand yakadzika ine muti unorema wedenga.
Iyo MEFT nyoro, iyo inongobvumidzwa kuNamibia-yakanyoreswa mutambo kutora zvipfeko uye kuvhara muna Ndira 29, inodaidzira kubviswa kwakazara kwenzou dzese, kusanganisira nenzombe dzinowanzo garira, kubva munzvimbo idzi. Zvese zvinodhura uye njodzi zvinofanirwa kutakurwa nekambani inotora kambani.
Iyo thenda inogona kunge iri yekuedza kuchengetedza vhoti yekumaruwa mushure mekuratidzira kwakashata kweSWAPO musarudzo dzemakanzura dzichangopfuura nechisimba chakasimba chakasimudzira chirongwa ichi kuva varimi vadiki vekutengesa veKavango East uye varimi vakuru vekutengesa veKunene neErongo,
Iyo thenda yakaonekwa yakanangana nemusika wekutengesa kunze, iine zvirevo zvekudaidzira vangangove-vatengesi kunze kwenyika kuti vaone kuti nyika yekuenda ichatendera kupinzwa kwavo zvinoenderana nemitemo yeCITES.
Zvinoita sezvisingaiti kuti chero munhu kuNamibia arikuda dzimwe nzou, asi kune musika mumwe unobatsira kunze kwenyika: Democratic Republic of the Congo uye aimbove Mutungamiri Joseph Kabila, akavaka hombe yemhuka yakazvimirira yega kumabvazuva kweKinshasa. Kubva 2017, mazana emapani emutambo - kusanganisira zebra, kudu, oryx uye twiza - akaendeswa kuDRC.
Izvi zvinogona kutevedzera zvirevo zveCITES izvo zvinongobvumidza chete kutengesa nzou kuenda "kunzvimbo dzakakodzera uye dzinogamuchirwa" dzinotsanangurwa se "in situ zvirongwa zvekuchengetedza kana nzvimbo dzakachengetedzeka musango mukati meiyo mhuka yemhando uye nhoroondo mu Africa".
Inguva chete ndiyo icharatidza ramangwana renzou idzi kana kutama kunokakavara kusingaitike, nekuvhima nekuvhima pasi pekukuvadza Kunokonzera Mhuka kubvumidza kutyisidzira kunogara kuripo.